Gburugburu Ebumnuche: Azịza nke Gbasara Ad-Ad Ad Safe? | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Tim Beverridge
Nchegbu nzuzo nke taa na-arịwanye elu, yana ọnwụ kuki, pụtara na ndị na-ere ahịa ugbu a kwesịrị ịnapụta mkpọsa ahaziri iche karị, n'oge na n'ọtụtụ. Nke ka mkpa bụ na ha kwesiri igosipụta ọmịiko ma gosi ozi ha na gburugburu nchekwa. Nke a bụ ebe ike ịchebara ihe gbasara ọnọdụ na-abata.
Ebumnuche gburugburu bụ ụzọ iji lebara ndị na-ege ntị anya dị mkpa site na iji isiokwu na isiokwu sitere na ọdịnaya dị na ngwakọ ad, nke anaghị achọ kuki ma ọ bụ ihe nchọpụta ọzọ. Ndị a bụ ụfọdụ uru dị mkpa nke ịkọwapụta gburugburu ya, yana ihe kpatara na ọ ga - enwerịrị maka azụmaahịa dijitalụ ọ bụla ma ọ bụ onye mgbasa ozi.
Ebumnuche Ebumnuche Na-enye Ihe Odide Karịrị Ederede
N'ezie arụ ọrụ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi nwere ike ịhazi ụdị ọdịnaya niile dị na ibe, iji nye ezigbo ogo ogo ogo 360 maka nkọwapụta peeji ahụ.
Nnukwu ihe elebara anya na-enyocha ederede, ọdịyo, vidiyo na onyonyo iji mepụta ngalaba ezubere iche nke na-adaba na ihe ndị chọrọ mgbasa ozi chọrọ, ka mgbasa ozi wee pụta na ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma kwesịrị ekwesị. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, otu akụkọ gbasara Open Australian nwere ike igosi Serena Williams na-eyi akpụkpọ ụkwụ onye egwuregwu bọọlụ Nike, mgbe mgbasa ozi maka akpụkpọ ụkwụ egwuregwu nwere ike ịpụta na gburugburu ebe dị mkpa. N'oge a, gburugburu ebe obibi dị mkpa maka ngwaahịa a.
Fọdụ ngwa ọrụ nwere ike ịkọwapụta ọnọdụ nwere ikike nyocha vidiyo, ebe ha nwere ike nyochaa ọdịnaya ọ bụla nke vidiyo, chọpụta akara ngosi ma ọ bụ ngwaahịa, mata akara ngosi dị mma, yana ederede ọdịyo na-agwa ya niile, iji nye ebe kachasị mma maka ịre ahịa n'ime na gburugburu mpempe ahụ. nke ọdịnaya vidiyo. Nke a gụnyere, dị mkpa, etiti ọ bụla n'ime vidiyo ahụ, ọ bụghị naanị aha, thumbnail, na mkpado. A na-etinyekwa ụdị nyocha a n'ofe ọdịnaya na onyonyo, iji hụ na saịtị ahụ n'ozuzu ya.
Ngwaọrụ ochie nwere ike inyocha utu aha vidiyo ma ọ bụ ọdịyo naanị, ma adabaghị n'ime onyogho, nke pụtara na mgbasa ozi nwere ike kwụsị na ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, aha vidio nwere ike ịbụ ihe na-adịghị ọcha ma were 'nchekwa' site na ngwa ọrụ gbara ọkpụrụkpụ, dị ka 'Otu esi eme nnukwu biya' agbanyeghị ọdịnaya nke vidiyo n'onwe ya nwere ike ịbụ ihe ekwesighi ekwesi, dịka vidiyo nke ndị na-eto eto na-eto eto biya - ugbu a mgbasa ozi ika na gburugburu ebe ahụ bụ ihe na-enweghị ahịa ọ bụla nwere ike imeli.
Solutionsfọdụ ihe ngwọta ewulitela ụlọ ọrụ nke mbụ ahịa ahịa nke na-enyere ndị ọrụ teknụzụ ahọpụtara aka ịpịnye algọridim ha dịka ihe mgbakwunye nke ichebe, ma na-enye ụdị nchekwa site na ịkpa ókè agbụrụ, na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ ọdịnaya na-egbu egbu - enwere ike itinye ya iji hụ nchekwa nchekwa na ekwesighi. jikwaa n'ụzọ ziri ezi.
Atumatu Ebumnuche Na-akwalite gburugburu Nchekwa
Ezigbo ebumnuche ebumnuche na-ahụkwa na ọnọdụ ejikọtaghị ya na ngwaahịa, yabụ maka ihe atụ dị n'elu, ọ ga-ahụ na mgbasa ozi anaghị apụta ma ọ bụrụ na akụkọ ahụ adịghị mma, akụkọ adịgboroja, nke nwere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ akụkọ na-ezighi ezi Dịka ọmụmaatụ, mgbasa ozi maka akpụkpọ ụkwụ tennis agaghị apụta ma ọ bụrụ na akụkọ gbasara etu akpụkpọ ụkwụ tennis si akpata mgbu.
Ngwá ọrụ ndị a na-enye ohere maka ịbịaru ọfụma karịa ijikọ isiokwu dị mfe, ma nye ndị ahịa ohere ịhọpụta gburugburu ha chọrọ ịgụnye, yana nke dị mkpa, ndị ha chọrọ iwepu, dịka ọdịnaya site na iji okwu ịkpọasị, ịkpa ókè agbụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị hyper, ịkpa ókè agbụrụ, nsị, stereotyping, wdg Dịka ọmụmaatụ, azịza dịka 4D na-eme ka mwepu ụdị akara ngosi ndị a dị elu site na njikọta naanị na ndị mmekọ ọkachamara dịka Factmata, na akara ngosi ndị ọzọ nwere ike ịgbakwunye iji mee ka nchekwa nke ebe mgbasa ozi pụta.
Ebumnuche Ebumnuche Na-aba Uru Karịa Iji Kuki Nke Atọ
Achọpụtala ebe a na-atụgharị uche na-adị irè karịa ị na-eche maka iji kuki ndị ọzọ. N'ezie, ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na ebumnuche gburugburu ebe obibi nwere ike ime ka ebumnuche zụọ site na 63%, na-ege ntị ma ọ bụ na-elekwasị anya n'ọwa.
Otu ihe omumu a choputara 73% nke ndi ahia na-eche na mgbasa ozi dị mkpa dabara na ọdịnaya niile ma ọ bụ ahụmịhe vidiyo. Na mgbakwunye, ndị na-azụ ahịa ezubere iche na gburugburu ihe omume bụ 83% nwere ike ịkwado ngwaahịa na mgbasa ozi, karịa ndị ezubere maka ndị na-ege ntị ma ọ bụ ọkwa ọwa.
N'ozuzu ahia ihu ọma bụ 40% elu maka ndị na-azụ ahịa ezubere iche maka ọkwa dị na ya, ndị ahịa na-enyekwa mgbasa ozi ndị gbara ha gburugburu na-akọ na ha ga-akwụ ụgwọ maka akara. N'ikpeazụ, mgbasa ozi kachasị mkpa dị mkpa wepụtara 43% karịa njikọ aka.
Nke a bụ n'ihi na iru ndị na-azụ ahịa n'echiche ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị na-eme ka mgbasa ozi na-akawanye mma, yabụ na-eme ka ịzụ ahịa zubere karịa karịa mgbasa ozi na-adịghị mkpa na-eso ndị ahịa na ịntanetị.
Nke a abụghị ihe ijuanya. Ndị ahịa na-ebuba ahịa na mgbasa ozi kwa ụbọchị, na-enweta ọtụtụ puku ozi kwa ụbọchị. Nke a choro ha ka ha wepuo ozi na-adighi nma ngwa ngwa, ya mere naanị izipu ozi di nkpa gafere maka inyochakwu ihe. Anyị nwere ike ịhụ iwe nke ndị ahịa a na ogbunigwe ahụ gosipụtara na ojiji nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị ahịa ahụ, agbanyeghị, na-anabata ozi dị mkpa maka ọnọdụ ha ugbu a, yana ịtụkwasị uche na gburugburu ebe obibi na-eme ka o doo anya na ozi dị ha mkpa n'oge a.
Mmezu Ezubere iche maka Mmemme
Nke kachasị echegbu ndị ahụ na-ewe iwe nke kuki bụ ihe nke a nwere ike ịpụta na mmemme. Agbanyeghị, ebumnuche gburugburu ebe obibi na-akwado mmemme, ruo n'ókè ebe ọ karịrị arụmọrụ nke kuki. Nke a bụ ozi ọma maka ndị na-ere ahịa, na-atụle akụkọ na-adịbeghị anya achọtara na mmemme mmemme na-adabere na kuki nke mgbasa ozi ruru 89%, ọnụọgụ nke 47%, na ntụgharị dị ala maka ngosi na vidiyo site na 41%.
Agbanyeghị, ebumnuche gbara ọkpụrụkpụ na-arụ ọrụ nke ọma na mmemme n'ihi na enwere ike ijere ya ozi n'oge, n'ọtụtụ, na gburugburu dị mkpa (ma dịkwa nchebe), karịa mmemme nke kuki kuki nke atọ nwere ike. N'ezie, ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya ka a na-akọwara gburugburu na-emeziwanye nke ọma karịa usoro mmemme ọ bụla ọzọ.
Ngwurugwu ohuru na-enyekwa ikike ịmịnye data nke mbụ site na DMP, CDP, sava mgbasa ozi, na isi mmalite ndị ọzọ, bụ nke a na-enye nri site na injin ọgụgụ isi, na-ewepụta nghọta gbara gburugburu nke enwere ike itinye n'ọrụ na mgbasa ozi mmemme.
Ihe a niile pụtara nchịkọta nke ezubere iche na data nke mbụ na-enye ụdị ohere ịmepụta mmekọrịta chiri anya na ndị na-azụ ha site na isoro ọdịnaya na-etinye ha aka n'ezie.
Contextual Targeting unlocks A ọhụrụ oyi akwa nke ọgụgụ isi N'ihi marketers
Ọgbọ na-esote nke ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi nwere ike imeghe ohere dị ike maka ndị na-ere ahịa iji mee ka ndị ahịa nwee ike ịkwalite usoro ịzụ ahịa na nyocha nke ọma, ha niile site n'inye nghọta miri emi banyere ọdịnaya na ọdịnaya kwesịrị ekwesị.
Ebumnuche gburugburu ebe obibi abụghị naanị na-abawanye ebumnuche zụrụ, ọ na-eme ya na obere ego, na-eme ka kuki kuki ọ bụla na-agbanwe nke ukwuu - nnukwu ihe dị mkpa na ọnọdụ akụ na ụba ugbu a.
Na anyị na-amalite ịhụ ihe agbakwunyere ezubere iche ngwaọrụ leverage mbụ otu data ọ bụla na-akwado DMP, CDP, ma ọ bụ Ad Server, anyị nwere ike ugbu a na-amalite na-ahụ otú nke a nwere ike isi ghọọ ntụgharị uche ọgụgụ isi na-arụ ọrụ omnichannel ebube, na-azọpụta oge ndị ogbenye ahịa. na ndị mgbasa ozi na-enwe nnukwu oge na mbọ site na imepụta ma na-etinye ọnọdụ zuru oke n'otu oge. Nke a na - eme ka o doo anya nzipu nke ozi kachasị mma na gburugburu ebe nchekwa dị mma na ngosi, vidiyo, amaala, ọdịyo na TV nwere ike ịgwa.
Mgbasa ozi gbasara gburugburu site na iji AI na-eme ka ika nwere ike ịpụta, nwekwuo mkpa ma na-enye ndị ahịa uru karịa, ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi ezubere iche maka omume metụtara iji kuki ndị ọzọ. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ na-enyere akara, ụlọ ọrụ, ndị mbipụta akwụkwọ na nyiwe mgbasa ozi ka ha gbanye akụkụ ọhụrụ na oge kuki kuki, na-ahụ na mgbasa ozi kwekọrọ na ọdịnaya na ọnọdụ akọwapụtara n'akụkụ ọwa niile, ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Ga n'ihu, ịtụkwasị uche n'ihe gbasara ọnọdụ ga-eme ka ndị na-ere ahịa laghachite n'ihe ha kwesịrị ịme - ịme ezigbo njikọ, ezigbo na mmetụta ọmịiko n'etiti ndị ahịa na ebe kwesịrị ekwesị na n'oge kwesịrị ekwesị. Ka ahịa na-aga 'laghachi n'ọdịnihu, ebumnuche gburugburu ụwa ga-abụ ụzọ amamịghe na nchekwa ga-aga n'ihu iji bulie ozi ahịa ahịa ka mma, nke bara uru karịa.
Chọpụta karịa gbasara ịchọta ebe a:
Budata akwụkwọ ozi anyị na-agbado n’ọdachi
Tags: sava adaddressable igwe onyonyoika-nchebe mgbasa ozicdponodumgbasa ozi gburugburu ebe obibigburugburu ahịaihe omuma ndi ozohyperisanshipọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchịezighi ezimmerụ ndọrọ ndọrọ ọchịchịnchegbu nzuzommemmeịkpa ókè agbụrụkuki ndị ọzọegbu egbu